Torohevitra manam-pahaizana manam-pahaizana manokana momba ny marketing | Fikarohana manokana, trano tsy mahazatra amidy
Home » Tetikasam-pahaizana manokana momba ny varotra
Posted Aprily 30, 2016
In Press, Fandefasana propagandy tokana
Tetikasam-pahaizana manokana momba ny varotra2016-04-302018-10-20https://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/07/SpecialFindsLogo-1.pngFikarohana manokana, trano tsy mahazatra amidyhttps://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/04/bim-logo-1.jpg200px200px
Brenda Thompson no tompon'ilay trano fandraisam-bahiny trano, Special "Finds ..." any amin'ireo tendrombohitra any andrefan'i Caroline Andrefana. Tahaka ny fananan'izy ireo mivarotra, ny tena fahafahany misafidy dia iray ihany, miaraka amin'ny fifantohana manokana amin'ny toetra tokana manana toetra maro. Anatin'ity tafatafa niarahana tamin'i Bill Kopatich ity, i Brenda dia miresaka momba ny fomba fiasany tsy manam-paharoa amin'ny fivarotana fananana tsy manan-tsahala.
Bill: Brenda, misaotra ny mizara ny tantaranao androany. Nanangana sehatra tena marina ianao ao amin'ny orinasa fanorenana trano - varotra fananana tsy manan-tsahala izay antsoinao manokana "Finds ...". Inona no atao hoe "Find ..." manokana?
Brenda: Ny "Find ..." manokana dia tsy voatery ho lafo; Tsy maintsy manana toetra manokana tokana izy. Nosoratanay daholo ny trano ambanin'ny tany mba hanamboarana sambon-danitra, na Chateau Frantsay aza.
Bill: Fantatro fa any amin'ny faritr'i Asheville, NC ianao any amin'ny Tendrontany Avaratra-Carolina. Firy ny faritra ara-jeografia noarinao?
Brenda: Amin'izao fotoana izao dia mandrakotra faritra iray ao anatin'ny roa ora latsaka avy any Asheville. Raha mbola mahatsapa aho fa afaka manompo ny mpanjifanay tsara, dia horaisiko ny lisitra. Izaho dia eo am-panaovana izao fotoana izao amin'ny fanoratana trano iray izay adiny roa. Trano Tiny ity. Nantsoiko hoe "Duality - A Cottage Luxury Camping". Izy io dia manana fanatsarana rehetra izay azonao eritreretina; Voasambotra izy ary voafehy anatiny, saingy mbola ilaina ny fifandraisana.
Bill: Inona no nahatonga anao nifantoka tanteraka tamin'ny fananana tsy manan-tsahala?
Brenda: Voalohany indrindra, ny tranoko rehetra dia efa nividy ahy noho ny maha-tokana azy; faharoa, tahaka ny tale mpanelanelana ho an'ny New York Stock Exchange, te-hampiasa ny fahaizako ara-barotra aho hamokarana zavatra mahaliana. Nanomboka nifanerasera tamin'ireo orinasa lehibe momba ny fananan-tany aho. Ao amin'ireo orinasa nentim-paharazana ireo, na kely na kely, ny tsirairay dia mifaninana ho an'ny ampahany mitovy amin'ilay poti-tena - trano fonenana cookie ambaratonga voalohany. Koa satria sarotra ny manavaka tokantrano iray amin'ny hafa, dia tsy afaka ny ho sanganehana aho amin'ny fivarotana azy ireo. Azoko atao anefa ny mientanentana be momba ireo trano nanana toetra amam-bolana. Afaka mivarotra ireo trano ireo aho mandritra ny andro; Fialam-boly ho ahy izany, ary nanana ny fahaiza-manaon'ny varotra aho mba hamiratra ireo fananana ireo.
Nandritra izany fotoana izany, nanana fanirian-dratsy aho, nitondra faniriana hampiasa ny tononkalo poezia, noho izany dia nampifangaro ny tononkalo, ny fahaizako momba ny varotra, ary ny fitiavana ireo toetra tsy mahazatra, ary namorona ny orinasa, Special "Finds ..." ... Ny toetra mampiavaka Ireo misafidy zavatra avy amin'ny ordinatera.
Bill: Misy fanontaniana iraisan'ny mpivarotra ve rehefa maniry hivarotra ny fananany tsy mahazatra izy ireo?
Brenda: Te hahafantatra izay ataoko izy ireo fa hafa noho ireo mpitsikilo hafa ary ny valinteniko dia ny zava-drehetra. Mifantoka amin'ny fitondrana "fiainana" ho any amin'ilay trano aho. Milaza izany aho amin'ny fomba iray ahafahan'ny mpividy "mieritreritra" hoe ahoana ny fomba itiavany azy ao an-trano, mba ho ao amin'ilay trano. Mitondra ny heviny maro aho rehefa tafiditra ao amin'ny dokam-barotra - izay hitanao - manaloka ny lokon'ny tantely; Ny zavatra henonao - ny fiaran-dalamby dia mitifitra lavitra; Ny fofom-pofonao - ala maitso mena; Ny zavatra tsapanao - fialofana matevina. Mampiasa dokam-barotra ara-pihetseham-po aho mba handefasana mpividy entana any an-trano amin'izay misy azy rehefa mamaky ny dokam-barotra. Tiako homena mpividy iray ny fahatsapana ny zavatra toy izany rehefa miditra ao an-trano ianao - izany dia lasa trano.
Bill: Moa ve maka fotoana lava hamidy ireo toetra manokana sy tsy manan-tsahala izay soratanao?
Brenda: Azo antoka fa tsy tokony hividy zavatra tsy mahazatra intsony noho ny toetra hafa izy. Ny "Finds ..." manokana dia matetika dia mivarotra haingana noho ny toetra mahazatra, satria voafaritra tsara ny mpihaino. Avy amin'ny anaran'ny orinasa, fantatry ny mpividy fa mitondra "Specials" manokana izahay. Izy ireo indray no mitady ny manokana "Find ...". Ampifanarahantsika ny roa ary ny fanambadiana dia miasa!
Tonga hanatona ahy ireo mpividy mba hahita zavatra manana toetra miavaka. Misy olona afaka miantso sy milaza fa tsy maintsy manana trano manan-tantara izy ireo, ary efa ho taona maro izany, ary tokony hijery ny tranon'ny renibeny izy. Noho izany dia hamaritra ity trano manan-tantara ity izy ireo ary sivy ora latsaka folo, raha manontany aho hoe: "Raha afaka mahita trano maoderina iray aho na tranokala iray, eny an-tampon'ny tendrombohitra manana fomba fijery mahatalanjona, heverinao ve izany? "Hilaza izy ireo hoe:" Raha ny marina dia ho tia tahiry tahaka izao izy ireo "! Farany, misy mpividy iray mitady trano, misy toetra izay manonona amin'ny ampahany amin'ny toetrany ... ampahany izay mahatonga azy ireo hahatsapa tsara.
Bill: Alao sary an-tsaina ny fomba fiteninao ireo trano ireo, ireo no tena fananan-tany.
Brenda: Tsia, ny vidiny dia tsy misy dikany. Ny fananana tsirairay dia mila manana toetra manokana. Tianay ny manintona ny lisitry ny avo indrindra sy ny mpividy, fa tena faly amin'ny fivarotana trano kely aho, toy ny manao trano fivarotana fivarotana.
Bill: Brenda, mba hikirakira izany, inona ireo zavatra tena manan-danja tokony hataon'ny mpivarotra iray tsy manan-tsahala mba hivarotra amin'ny fotoana mety sy amin'ny vidiny tsara indrindra?
Brenda: Voalohany, fantaro ny sarobidy Amin'ny fananam-bidy iray hivarotra - zavatra tsy misy olon-kafa! Alao ny dingana ilaina mba hanehoana ireo toetra miavaka ireo. Aza mandany fotoana sy vola hividianana singa miavaka ho an'ireo mpividy tsy manan-tsahala. Manana ny taniny amin'ny toe-javatra sarotra, ary mikarakara azy. Aoka ianao vonona hampiseho izany amin'ny fotoana rehetra. Avelao izy io toy izay azonao atao. Miomàna hivoatra rehefa mahazo mpividy, satria rehefa misy mpividy tsy manam-paharoa, dia mety tsy folo amin'izy ireo no mitady ny tranonao; Mety misy ny iray ihany.
Other Press about Brenda Thompson and Special Finds ...
Brenda Thompson, Asheville Realtor® dia manampy ny mpividy hahita ny fananana tokanaPress
Fiainana maharitra | Homes UndergroundFandefasana propagandy tokana